Resident Evil74D ဖယောင်းတိုင်အသစ်တွင်သွေးနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုအနံ့ကိုခံစားပါ - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Resident New Evil74D ဖယောင်းတိုင်တွင်သွေးနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုကိုရနံ့
Resident New Evil74D ဖယောင်းတိုင်တွင်သွေးနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုကိုရနံ့
by admin ရဲ့ ဇန်နဝါရီလ 5, 2017
ကရေးသား admin ရဲ့ ဇန်နဝါရီလ 5, 2017
Shannon McGrew မှရေးသားသည်
အများစုမှာထိတ်လန့်ပရိသတ်တွေဟာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာကြပါပြီ "အိမ်တွင်းမကောင်းဆိုးဝါး" ဂိမ်း, ဘယ်လိုသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူး?
ဒီစကွဝ1996ာဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာဗီဒီယိုဂိမ်းထွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်ထွက်လာကတည်းကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောနေရာမှာအဓိကကျတယ်။“ Resident Evil 7: ဘေးဥပဒ်”ကြည့်ရှုသူများသည်ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် 4D ဖျော်ဖြေမှုနယ်ပယ်သို့ကြည့်ရှုသူများမှကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သင်၏အာရုံခံစားမှုကို ထပ်မံ၍ နစ်မြုပ်စေလိုသည်။
Geek ကုန်သည် Merchoid ကနေလွှတ်ပေးလိမ့်မယ် "Resident Evil 7: သွေး၊ ချွေးနှင့်ကြောက်စိတ် 4D VR ဖယောင်းတိုင်" နောက်ဆုံးပေါ်အရစ်ကျ၏အခမ်းအနား၌တည်၏။
အတွင်းပိုင်းနီးပါးဖြစ်ခြင်းလျှင် အိမ်တွင်းမကောင်းဆိုးဝါး မလုံလောက်ပါ၊ သွေးထွက်သံယိုမဲဆန္ဒရှင်တီထွင်သူများကသင့်အားအနံ့ဆိုးကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကာမျက်မှန်များအပြင်တွင်သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
ဒါကကောင်းတဲ့အရာလားမသေချာပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကို ၀ န်ခံရမှာပါ။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများကအနံ့သည်သစ်သားဟောင်းများ၊ သားရေများနှင့်အချို့သောသွေးအချို့ကိုပြန်လည်သတိရစေလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ရှိနေဆဲဟုရနံ့ကော? အဆိုပါဖယောင်းတိုင်များသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၈-၂၀ နာရီခန့်ကြာရှည်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၁၈.၉၉ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်မသေသပ်သောအရာဝတ္ထုများအလယ်ဗဟိုတွင်ရှိနေသော်လည်းတောင်မှအရည်အသွေးမြင့်ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုကိုရရှိသောအခါသိပ်မများလှပါ။
ဖယောင်းတိုင်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မရောင်းချရသေးပုံရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့်ရောင်းထွက်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ ထို့ကြောင့် Merchoid တွင်သင်ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ကစားသောအခါကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ပေါင်းစပ်လိုပါက “ Resident Evil 7: ဘေးဥပဒ်”.
ငါ့အတွက်တော့ငါတို့အကြိုက်ဆုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်နှင့်ဇာတ်ကောင်များအပြီးတွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဖယောင်းတိုင်များကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာမိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထိတ်လန့်နေသောဖယောင်းတိုင်များကိုဆက်လက်စုဆောင်းရန်မျှော်လင့်သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းကြီးစွာသောစကားပြောဆိုမှု starter ပါပဲ။
အပ်ဒိတ်: ဖယောင်းတိုင်များကို Merchoid တွင်ရောင်းခဲ့သော်လည်းရရှိနိုင်သေးသည် Numskull မှတဆင့်.
ဖယောင်းတိုင်Resident Evil 7
Cherry Pie ရောင်စုံ 'Twin Peaks' Vinyl သည်အေးဂျင့် Cooper Approved
Cult of Chucky သည်လာမည့်လတွင်ပါဝင်မည်။